Yekuchengeta vana: chii icho uye maitiro ekuchikumbira | Ehupfumi Zvemari
Kuve nemwana, kana kutora mumwe, zvinoreva kuti, dzimwe nguva, tinofanirwa kutora nguva kubasa kuti timuchengete. Zvisinei, pane mamiriro ezvinhu anotitadzisa kushanda kwechinguva. Izvi zvinoreva here kuti tinorasikirwa nemabasa? Neraki, kwete, nekuti pane chishandiso chekubatsira vabereki: zororo rekuchengetwa kwevana.
Kana usati wambonzwa nezvazvo, kana kana iwe usinga zive zvese, nhasi tinoda kutarisa nezve iyi chaiyo nhaurwa kuti iwe uzive icho chine, ndiani anogona kuikumbira, ndeipi nguva yayo uye chii chinoitika munguva iyoyo.
1 Chii chinonzi zororo rekuchengeta vana?
2 Ndezvipi zvinodiwa zvinofanirwa kuzadzikiswa kuti uwane mukana wezororo rekuchengeta vana?
3 Iyo nguva yezororo rekuchengeta mwana
4 Chii chinoitika ndiri pazororo
4.1 Hapana chitaurwa
4.2 Kudzingwa panguva yekuzorora
4.3 Shanda mune imwe kambani
4.4 Kushaya basa panguva yezororo
Chii chinonzi zororo rekuchengeta vana?
Zvinoenderana ne Chinyorwa 46.3 cheVashandi Statute: "Vashandi vachange vaine kodzero yekumbowana nguva yezororo isingapfuuri makore matatu yekuchengeta mwana mumwe nemumwe, zvese zviri zvisikwa, sekuchengetwa, kana panguva yekuchengetwa nechinangwa chekurerwa. , "kuverenga kubva pazuva rekuzvarwa kana, pazvinenge zvakakodzera, kubva pamatare edzimhosva kana ezvekutonga.
Nekudaro, kana munhu anoshanda ari chikamu chemhuri inozivikanwa semhuri hombe, kuchengetwa kwebasa ravo kuchawedzerwa kusvika pamwedzi gumi neshanu mune yemhuri hombe yeboka revanhu vese, uye kusvika kune imwechete yepamusoro yemwedzi gumi nemasere kana iri chikamu chakakosha. "Kana munhu achishandisa kodzero iyi nehurefu hwakaenzana nehutongi semumwe mubereki, kuchengetwa kwemabasa kuchawedzerwa kusvika pamwedzi gumi nesere."
Mune mamwe mazwi, tiri kutaura nezvekodzero iyo chero mushandi, murume kana mukadzi, anofanirwa kumbira "kuzorora" muhukama hwako hwebasa chero bedzi zvichidikanwa kutarisira mwana ari pasi pemakore matatu ekuberekwa, kana panyaya yekuchengetwa kwevanhu vasiri vake kana kuitwa mwana mudiki.
Munguva iyoyo, basa rinomiswa, asi riine mhedzisiro: nokusashanda, kambani haina kusungirwa kubhadhara. Izvo zvinochengetedzwa ikodzero yemushandi iyeye kuitira kuti, kana kuchengetwa kwemwana kwapera, vanokwanisa kudzokerazve kukambani.
Ndezvipi zvinodiwa zvinofanirwa kuzadzikiswa kuti uwane mukana wezororo rekuchengeta vana?
Kana iwe uri kufunga nezvekukumbira kodzero iyi kubva kukambani, iwe unofanirwa kuziva kuti kune zvakateedzana zvezvinodikanwa zvaunofanira kusangana nazvo kuti zvikwanise kupihwa. Chekutanga pane izvi hapana mubvunzo icho chokwadi chekuti kune mwana ane makore matatu zvichidzika. Uyu anogona kuve mwana wepamutemo, pamwe nekurerwa kana kurerwa.
Iwe unofanirwa kuzivisa iyo kambani kuti iwe unobvuma kodzero iyi nekunyora, uye nguva dzose nechidimbu chiziviso chemazuva gumi nemashanu, icho chingave chakareba kana chimwe chinhu chakasimbiswa nechibvumirano chakabatana. Muchiitiko ichi, iwe unofanirwa kuratidza dhata remwana, zuva rake rekuzvarwa, uye kutanga uye kupera kwemazororo ekusavapo.
Iyo kambani, kune chikamu chayo, inofanirwa kumisa mushandi kwenguva yaanga achishanda, ichimupa iye muhoro, zororo risingatore, mari yekuwedzera ... Vazhinji vanozviona senge rudzi rwekugadzirisa, asi handizvo. Mushandi achiri kubatana nekambani, uye ane basa rekuchengetera, nenzira yekuti awanise kuwanazve chinzvimbo chake paakada kupedza zororo rekusavapo.
Kamwe chinangwa chekukumbira zororo rekusavapo chaziviswa, kambani haigoni kuramba kuzvigamuchira, sezvo, sekodzero, mutemo unokudzivirira. Naizvozvo, mune chiitiko chekuti pane kuramba, kana kuti kudzingwa kuchiitika, zvinogona kupihwa mhosva uye zvichinzi hazvina maturo, zvine mhedzisiro kukambani.
Iyo nguva yezororo rekuchengeta mwana
Zororo rekuchengetwa kwevana Inogona kukumbirwa chero nguva chero bedzi mwana ari pasi pemakore matatu ekuberekwa. Semuenzaniso, unogona kunyorera nezvayo iwe uchangobva kuzvarwa uye haufanirwe kudzokera kubasa rako kusvika iwe uine makore matatu ekuberekwa. Kana iwe unogona kushanda uye chero nguva mukati menguva pakati pemakore matatu ne0, tora zororo rekusavapo.
Uyewo inogamuchirwa kuiraira nenzira yakatsemurwa, ndiko kuti, rinogona kuva zuva, vhiki, mwedzi ... Iko hakuna padiki kana yakanyanya nguva yekusangana, uye inogona kukumbirwa nguva dzese x wozodzoka zvakare, nguva dzose uine risati raziviswa kukambani.
Zvino, kunyangwe kuve pazororo rekushayikwa kuchinyatso kureva kuti pane kuchengetedzwa kwebasa, chokwadi ndechekuti rinofanirwa kuve rinokodzera. Uye ndezvekuti:
Kuchengeterwa Jobho kunoitwa chete kwegore rekutanga. Mune mamwe mazwi, kana mushandi akakumbira zororo rekusavapo kwekuchengetwa kwevana kwegore rimwe chete, anokwanisa kudzokera kubasa rake rimwe chete.
Kana zororo iri rakakura kupfuura gore rimwe chete, hapana basa rekuchengetedza. Kana nguva yacho ikawedzerwa kupfuura gore rimwe chete, kunyangwe hukama huripo pakati pemushandi nekambani huri kuramba huripo, chokwadi ndechekuti mushandirwi haasisina basa rekuchengetedza basa riya kumunhu iyeye. Paunodzoka, unofanirwa kupa basa mune rimwechete boka rehunyanzvi kana chikamu, usambofa wakaderera.
Chii chinoitika ndiri pazororo
Paunenge wakumbirwa, uye ukaitwa, sezvatambotaura, zvinoreva kuti hausi kuzoshanda, asi hausi kuzogamuchira muhoro kubva kukambani futi. Hukama hwakatomiswa kudzamara hwave kuitwazve.
Nekudaro, panguva iyoyo, mamiriro ezvinhu anogona kuitika anokanganisa mushandi pazororo rekusavapo, senge:
Chaizvoizvo iyo kambani haina chisungo chekupa kune iye mushandi, Asi iyo Social Security ichafunga nezve iyo nguva seyakanyorwa, kwete kune chero maitiro, asi kune vamwe chete. Kunyanya, uye zvichibva pachinyorwa 237 cheGeneral Social Security Mutemo, nguva dzekuenda kunochengetwa kwevana dzakanyorwa mune chiitiko chekurega basa, kuremara zvachose, kufa uye kupona, maternity uye baba.
Zvino, mune nyaya yehukuru, zvinoverengeka kuitira kukumbira makosi ekudzidzisa, semuenzaniso, kana kuunganidza "zvekuwedzera", kunyangwe ivo vaisazozvigamuchira panguva iyoyo, chete kana hukama hwebasa hwakatangwazve.
Kudzingwa panguva yekuzorora
Kunyangwe mushandirwi anogona kudzinga mushandi pazororo rekusavapo, chinowanzoitika ndechekuti kudzingwa kwacho kunoongororwa kuti kuone kana kuri kwechokwadi kana kusakosha. Izvi zvinogona kuitika kana iwe ukazvisanganisira muERE kana ERTE.
Shanda mune imwe kambani
Aya mamiriro haawanzo kujairika, nekuti kana iwe wakakumbira zororo rekusavapo kwekuchengetwa kwevana, zvinenge zvisingaite kuti uende kunoshanda kune imwe kambani kwete mune iyo yaunofanirwa kunge uine basa. Asi inogona kunzwisiswa kana iri basa rine ipfupi purogiramu, kana iyo inobvumidza kuyananisa hupenyu hwemhuri uye hwekushanda (chimwe chinhu chisingakwanise kuitwa mune yekambani huru).
Zvakadaro, iyo chaiyo nyaya yaizofanirwa kuongororwa.
Kushaya basa panguva yezororo
Kana iwe uchifunga kuti iwe unogona kukumbira hurovha muzororo rekusavapo iwe uri kukanganisa. Chaizvoizvo Iwe uchiri kubatana nekambani, uye nekudaro hausi mune zviri pamutemo mamiriro ekushaiwa basa.
Izvi zvinoitika kana iwe waida kukumbira rubatsiro. Izvi zvinorambwa nekuti nekuda kwemutemo iwe uri mushandi anoshanda, kunyangwe panguva iyoyo yezororo haugamuchire muhoro (iwe haushandewo).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » Basa » Zororo rekuchengetwa kwevana